Chipambo cheplastiki - bestpvcfence.com
musha >Products >Chipfudze cheplastiki
Danda replastiki kana kuti rakagadzirwa kubva kumapuranga eVinyl kana kuti PVC rinoumbwa nemapurasitiki epakadzika anoshandiswa mumasvingo, savinyl (polyvinyl chloride), polypropene, nylon, yakagadziriswa resin (polyethylene) asa, kana kubva kumaplasitiki akachinjwa zvakasiyana. 2 kana zvakawanda zvezvikwata zvepurasitiki zvinogona kunge zvichiwedzera kuwedzera simba uye UV kugadzika kwedanda.
Aya masvingo epurasitiki anogadzirisa hutanda hwomumatare esimbi nemafunguro mashoma (1 "mazaruriro kana pasi) kwemuzasi kwepambo; Iyo inowedzera inosanganisira kushamwaridzana kunowanikwa kwechidimbu chehafu-gumi "kuchengetedza nheyo yechipfuti kusvika pasi nechepamusoro pemapuranga epasi. Zvakanaka kune mhando dzose dzezvipfuwo uye chido chedu chepurasitiki chetambo. Izvi zvinogadzirirwa kuchengetedza mhuka kunze, zvisinei kuti hauna kuchinja kwesimba rehurumende yekubatanidza zvose-metal fence. ivo vakanaka kumativi ose mubindu kuti vasapinda marara, mashizha nemamwe mhuka (inonziwo zviputi zvinokonzera). ivo vanowanzojaira kutarisira mhuka.
Enclosure kit zita uye mazita ekuraira: chivako chinowanikwa (chakasimba) chinosanganisira CritterFence 700 plastic fence web, (yakasimba) inosanganisira CritterFence 800 plastic fence web uye (yakasimba) inosanganisira CritterFence 1100. Aya mafananidzo anoona simba rinopwanya mapaundi.
Nyaya pamusoro pehukuru nekureba: iyo 2 Numeri mukati mezita reprojekiti irefu uye urefu. somuenzaniso, maserex300 ndiwo 8 mamita akareba, mamita mazana matatu pakureba. Kana iwe uine chirongwa ne 600-foot line, iwe unoda 2 8 × 300 fence kits, nezvimwe zvakadaro.
Chii chiri plastiki fence
Plastiki fence panels kubva kuHybrid Fencing inoshandiswa uye inochengetedzwa pasina, uye inogona kuiswa mumisasa yako yekrete ikozvino pane imwe nzvimbo inotora nzvimbo dzako dzepakutanga dzehuni.
Zvakawanda kupfuura kungoita bindu rekurima, chigadzirwa cheHybrid chinounza Mutsva wakakwana kuJindu rako iro rinenge riri pamusoro pekuchengetedza pasina, rinogona kumira iro iwe unogona kunge usingadi kutarisana nehuori semapuranga emapuranga, kungowanzoshamba pasi!
Izvo zvinoumbwa neU-yakagadziriswa ekakisi yehupenyu uye inogadzirirwa kuti iite zvisina kunaka mamiriro ezvinhu emamiriro okunze. Zvigadziriswa uye pfuti dzakaputirwa misoro nemigwagwa zvakagadzirirwa kurwisa kupisa uye kuderedza kunyange mukati memamiriro ekunze.
Kusiyana nematanda / matanda fence, Matrix Picket Kuronga kwakaoma, kwakasimba uye kwakasimba, hakuzori kuora, kuputika, kuputika, warp, mildew, zvipembenene uye zvinoputika zvinopesana, uye zviri nani kune zvose, zvinogona kunge zvingada kupora.
Plastiki Fence Post
Purasitiki yekuviga fence nzvimbo inobvumira kuvhara mapurisa uye zvigadziro zvinoputirwa muchipo che groove kune rumwe rutivi rwepasiti kamwe kamwe erection garden uroyi. Iyo inoshandiswa nenzira yakafanana sechitsva chekrete fence post kutsigira huni fence panels asi haisi nyore kunzwisisa kuisa sechiedza makumi mapfumbamwe kupfuura chimiro chaicho chekrete.
Icho chinyorwa chichingova chekufamba kwenguva. Iyo mapurasitiki emusarudzo uyewo mhando yakawanda yakasiyana-siyana yemapuranga panhandare yemapuranga kunze uko inobvumira vatengi kuzvigadzira fenzi yavo yekuita kuti vafanane nebindu ravo uye maitiro.
Post yekugadzirisa inongova mamiriro ezvinhu dzimwe nguva anopukuta nemvura inopisa yakaoma saponaceous.
Chipande chepurasitiki fence
Chipindu chemuzinda wepurasitiki chiri chakanaka kuitira kushandiswa kwemwaka mukati mebindu kana chero nzvimbo chero ipi zvayo yaunoda kuti iite nekukurumidza yakavharwa. Chipindu chepurasitiki chinogonawo kubviswa nokukurumidza uye kushandiswa zvakare uye zvakare zvakare. ivo vane mamiriro ekunze asina simba, kureruka kunorema uye nyore kuisa. Maitiro anotamira haafaniri kutora mashizha uye pedrete footings. iwe unongopinda musimbi zvigaro ne hammer sledge hammer. imwe munda wepurasitiki masvingo emadziro, airehwa kugadziriswa kwekusingaperi, anoda mashizha emakumbo panguva yakatarwa kuti agamuchire panotangira mapepa. Hezvino izvo zvaunoda kuzvinzwisisa kuti uise mu plastic plasti cencing.
How to install plastic fence?
Nhanho imwe - Criterion style
Nzira yakakura yepurasitiki munda inopisa inopiwa. zvose zvine zvigadziriro zvayo yekugadzira uye zvinyorwa. Shanyira munda wako kupa soro uye edza zvavanoda. Ita chinyorwa chekugadzirisa tsanangudzo semusana wakakwana pakati pezvigaro kana zvido zvetsoka. Mamwe mapurisa epurasitiki masvingo ane masvingo anosanganisira pre factory-made fence panels uye glued footing spacing. ngwarira kuva nemashoko akakodzera usati wagadzira mabhomba. Uyewo, tanga chinyorwa chemhando ipi neipi yakakosha semasuo, mapuranga ematombo, kana zvigadziko zvemakona.
Zvadaro, gara pamuganhu wako wekumiganhu uye chengetedza mifananidzo yose yekudzivirira zvinhu zvaungangoda. shandura chidimbu chimwe chegedhi rimwe mukati yako.
Gadzirai nzvimbo inoparadzaniswa mushure mekuchengetedza mapurisa epurasitiki mupfini wezvakanyorwa. Gurai muganhu wenyu wose mutsara mutsara nemugadziri wechirangaridzo wezvakagadzirwa zvezvigadzirwa, saka wedzera imwe chinyorwa, kuti uite huwandu hwaunoda chete. pamwe chete kuwedzera imwe nzvimbo yega rimwe gedhi.
Nhanho mbiri - Isa kunze
Isa mutsara wako muganhu nekukanda mumatanda mumatanda mumugwagwa waunoda fence yako. iwe uchakwanisa kufungidzira maitiro ekutambudza kwenguva pfupi, mitsara yakarurama zvikamu. Zvadaro musungirire sheni yakabva padanda padanda.
Danho rechitatu - Gadzirai zvinyorwa
Gadzirira mashomanana sezvakaitwa nemuiti wehupamhi, hupamhi, nzvimbo, uye kana kwete kana kwete krete inodiwa. Chengetedza nzvimbo, kana zvichidikanwa, pane yako. Rigid pre-yakagadzirwa yeplastiki fence panels inogona kudikanwa nemakumbo ezvimwe zvishoma, zvishoma nezvishoma asi zvishoma nezvishoma mapurisa epurasitiki masvingo angave asingadi kudikanwa muzvikamu zvishoma kudarika. Shanduro dzakasiyana-siyana dzepurasitiki dzichapfuura danho iri.
Danho rechina - Isai Posts
Isai zvinyorwa mukuchengetedza zvinogadziriswa nemagetsi. Inzvimbo dzakasiyana-siyana dzepurasitiki ganda mapurisa achangoshandiswa pakushandisa nyundo yekuchera mwana pazvenguva pfupi. Zvimwe zvirongwa zvinosanganisira nheyo yekuvhara pakudarika kwemashure. kungovhara mukati mechitsva ipapo kuisa chinyorwa. iyi nzira yakanakisisa kana iwe uchida kubvisa feni yechando kuti uiise zvakare munzvimbo imwechete mukati megore.
Nhanho shanu - Isa Fence
Tanga pane shamwari yekupedzisira kana gedhi. Isa mazhenje efambo semangwana nemuiti. Inzvimbo dzakasiyana-siyana dzepurasitiki yakasongedzwa chete kubva pamakona.
Danho rechitanhatu - kuguma
Isa masuo, trim hardware, pedyo uye wapedza!
Jovyea inyanzvi yekugadzira Chinese (factory / wholesaler / suppliers) iyo inofunganya nekugadzira, kukura nekugadzirwa kwemapurogiramu epulazi epurasitiki.Indaneti yakashambadzirwa yakashambadza, yakanaka, yakanaka. Zvose zvemiti yedu inoteerera nehutano hwakanaka hwehutano hwemhando, zvigadzirwa zvedu zvave zviri vazhinji vevatengi pamwe chete vanobvumirana.